Hodan Xasan Oo U Tartamaysa Doorashooyinka Wakiilada Wkhtiga Dhexe Ee Dalka Maraykanka – somalilandtoday.com
Hodan Xasan Oo U Tartamaysa Doorashooyinka Wakiilada Wkhtiga Dhexe Ee Dalka Maraykanka
(SLT-Washington)6da bishan Nofeembar waxaa la filayaa iney dhacdo doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka, waxaana murashaxiinta ka mid ah siyaasiyiin ka soo jeeda Soomaaliya. BBC-da ayaa wareysatay Hodan Xasan oo u tartamaysa mid ka mid ah kuraasta aqalka wakiillada ee gobolka Minnesota.
Hodan oo ka tirsan xisbiga Dimuqraaddiga ayaa u sharraxan kursiga degmada uu lambarkeedu yahay 62A, waana mid ka mid ah kuraasta ugu saameynta badan ee gobolka Minnesota.
Gabadhan oo ah aqoonyahanad baratay cilmiga caafimaadka bulshada, una doodda xuquuqda aadanaha, ayaa horay u ahayd qof qaxooti ah oo ka tagay dalka Soomaaliya.
Hodan oo 20 sano ka hor qaxooti ahaan ku tagtay Mareykanka waxay shahaadada darajada heerka labaad ee Jaamacadda, oo loo yaqaanno Master’s, ka qaadatay jaamacadda Augsburg ee ku taalla magaalada minneapolis, wakhti xaadirkanna waxay shaqadeedu ahayd caafimaadka dhinaca dhimirka.
Wareysi ay siisay laanta Afsoomaaliga ee BBC-da ayay uga hadashay hammigeeda siyaasadeed ee la xiriira doorashada iyo ujeeddadeeda, maadaama ay degmada ay hadda kursigeeda u tartameyso dagganeyd tan iyo sannadkii 1991-kii.
Iyadoo ka hadleysa waxa ay ka rajeyneyso natiijada doorashada ayay tiri: “Filashadeydu waa guul inshaAllah, maxaa yeelay shaqo badan ayaan ka soo qabanay doorashadan, sannad ayaan hadda sii mareynaa, xaafadda aan ka tartamayana waa xaafad ay inta badan ka codeeyaan dadka taageersan xisbiga Dimuqraaddiga, anigana waxaan ku tartamayaa dalladda xisbiga dimuqraaddiga. Marka guul weyn unbaan sugeynaa”.
Maxay siyaasiyiinta Soomaalida u door bidaan Xisbiga Dimuqraaddiga?
Siyaasadda waddanka Mareykanka waxaa saameynta ugu ballaaran ku leh labada xisbi ee ugu waaweyn ee kala ah Jamhuuriga iyo Dimuqraaddiga.
Waxaa jira Soomaali badan oo taageera siyaasad ahaan xisbiga dimoqaraadiga.
Soomaalida guulaha ku gaaray taageerada xisbigaas waxaa ka mid ah Ilhaan Cumar oo hadda u tartameysa kursiga xildhibaannimada aqalka Koongareeska, horayna u soo noqotay wakiil deegaan.
Haddaba, ayadoo ay xisbiyo kale ka jiraan Mareykanka, maxay Soomaalida intooda badan u door bidaan xisbiga Dimuqraaddiga?
Su’aashaas waxaa ka jawaabeysa Hodan Xasan oo markii ugu horreysay u taagan xil siyaasadeed iyadoo ka soo jeedda garabka dimuqraaddiga.
“Farqiga aan ku kala doorannay xisbiga Jamhuuriga iyo midka Dimuqraaddiga waa in midkood, oo ah Dimuqraaddiga, uu ogolyahay jiritaanka qofka midabkiisu madow yahay, uuna aqbalo in miiska lala soo fariisto oo wax lala qeysado.
Laakiin xisbiga Jamhuuriga waxaa ku jirta islaam nacayb, cunsuriyad ku saabsan iney neceb yihiin dadka midabka madow leh, sidaas ayaana ku kala doorannay, waayo qof bani’aadam ah oo damiir leh ma taageeri karo xisbiga aan jiritaankiisaba aqoonsaneyn. Xisbiga Dimuqraaddiga ahna waa xisbi soo dhaweeya dadka danyarta ah, dadka soo galootiga ah iyo dadka leh diimaha iyo midabbada kala duwan”.
Fikirka Qaxooti nacaybka ah ee Trump miyuu saameyn ku yeelan karaa murashaxiinta horay qaxootiga u ahaa?
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si joogto ah u dhaliila dadka soo galootiga ah ee Mareykanka, in badan oo ajandeysaashiisa ahna wuxuu ku saleeyay sidii loo yareyn lahaa qaxootiga ku sii qulqulaya waddankaas.
Dad badan ayaa is weydiinaya saameynta ay hadallada qaxooti naceybka ah ee madaxweyne Trump ku yeelan karaan dadaallada ay dadka horay soo galootiga u ahaa ugu jiraan iney xilal siyaasadeed ka qabtaan Mareykanka.
Hodan Xasan ayaa aaminsan in Trump uusan baddali karin dookha shacabka ka qeyb qaadanaya doorashada.
“Waa macquul in hadalka Trump uu yareeyo taageerada siyaasiyiinta qaxootinnimada ku soo galay, laakiin aniga waxaan aaminsanahay taas lidkeeda.
Mar walba oo uu Trump caayo dadka qaxootiga ah iyo muslimiinta, inta badan dadka Mareykanka ah waxay qaataan fikir ka duwan kiisa, waxayna soo dhaweeyaan dadka soo galootiga ah iyo islaamka”.
Kursiga xildhibaanka degmada ee tirsigiisu yahay 62A oo ay hadda u tartameyso Hodan waxaa 38-kii sano ee lasoo dhaafay heysay haweeney kale oo lagu magacaabo Karen Clark.
Wixii ka dambeeya 6-da bishan oo ku beegan maalinta Talaadada ah ee isbuuca dambe ayaa la ogaan doonaa natiijada ka soo baxda doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka, taasoo ay si weyn ugu loollamayaan siyaasiyiinta labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraaddiga.
Guusha doorashadaas ayaa u saamaxaysa madaxweyne Trump inuu awood u yeesho labada sano ee u dhoiman inuu meel mariyo shuruuc hor leh, ama uu noqdo madaxweyne iska dhamaysta wakhtiga u dhiman